Barnaamijyada iyo aaladaha ku jira naqshadeynta garaafka | Abuurista khadka tooska ah
In berrinkii of graphic design, waa lagama maarmaan yaqaan sida loo maareeyo aaladaha kala duwan iyo barnaamijyada jira, kuwa ka shaqeeya deegaankan, joogitaanka safka hore ee cusbooneysiinta iyo sheekooyinka cusub waxay u taagan tahay farqiga u dhexeeya tayada naqshadeynta.
Qalabyada looga faa'iideysan doono naqshad kasta oo muuqaal ah, waxay ku xirnaan doonaan nooca shaqada aad rabto inaad gaarto Nasiib wanaagse, waxaa jira in badan oo aan hoos ku xusayno.
1 Barnaamijyada iyo qalabka ay naqshadeeyayaasha garaafku isticmaali karaan
1.1 Qalabka dib loogu hagaajiyo sawirrada iyo sawirada
1.2 Qalabka sawirka
1.3 Qalabka tijaabada ah
1.4 Qalabka loogu talagalay sameynta naqshadaha websaydhka
1.5 Qalabka Pantone
1.6 Qalabka qoraalka
1.7 Qalab aasaasi ah
1.8 Aalado kale
Barnaamijyada iyo qalabka ay naqshadeeyayaasha garaafku isticmaali karaan
Qalabka dib loogu hagaajiyo sawirrada iyo sawirada
Kuwa ugu caansan uguna isticmaalka badan waa "Gimp"Waxaa loo qiimeeyaa inuu wanaagsan yahay waana lacag la'aan ama"Pixelmator"Kaas oo kaliya u shaqeeya barmaamijka MAC waana qaali, ugu dambeyn"Adobe Photoshop”Qalab aad u qiimeeya isticmaaleyaasha, aad u dhameystiran oo had iyo jeer ku daraya hagaajinta barnaamijkeeda, saddexda midkood tani waxay u muuqataa tan ugu fiican.
Barnaamijka Photoshop waa mid ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan tan iyo markii ay u shaqeyso sameynta dib u soo celinta sawirrada, si wax looga beddelo fiidiyowyada iyo sawirrada dhijitaalka ah. Sidoo kale, isticmaalkiisa waxaa loo kordhiyay xirfadleyda sawir qaadista kuwaas oo u adeegsada hagaajinta iyo ku siinta dhammaystir la'aanta sawirradooda.
Barnaamij aan la cusbooneysiin beryahan dambe oo ay weli adeegsadayaasha qaar adeegsadaan ayaa ah FreeHand MX ama Corel Draw Graphics Suite X7 taas oo gaar u ah isticmaaleyaasha Windows-ka isla markaana ka mid ah kuwa loogu isticmaalka badan yahay is-waafajinta iyo la-qabsiga barnaamijyada kale waa Sawire-bixiye.
Adobe Illustrator wuxuu ka shaqeeyaa hagaajinta dulucda sawir kasta sameynta daabacaadda ayaa si aad ah loo qeexay, waxay sidoo kale u oggolaaneysaa inay ka dhigto faylasha ay ku jiraan sawirradu kuwo culus.
Qalabka tijaabada ah
Barnaamijka hadda waa la isticmaalaa Adobe InDesign, waxay ku habboon tahay xirfadlayaal sameeya majaajillo qoraallada ah.
Qalabka loogu talagalay sameynta naqshadaha websaydhka
Naqshadahan, kuwa ugu badan ee ay adeegsadaan xirfadlayaashu waa barnaamijyo ku habboon sameynta noocyada hore ee bogagga qaab HTML ah waana taas rashka Waxay faa'iido u leedahay sameynta qaar ka mid ah animations-ka aasaasiga ah, dib-u-hagaajinta iyo sharaxaadda sawirrada ama Flash taas oo ah barnaamij xoogaa ka casrisan oo loo isticmaalo in lagu abuuro fiidiyoowyo iyo animations aad u adag adoo adeegsanaya loox. Waa muhiim in la ogaado taas Flas ma u dhigma iPhone iyo iPad madal Ilaa codsiyo dheeri ah la rakibo, loo abuuray in lagu xalliyo arrinta iswaafajinta.
Waxay ka kooban tahay shaybaarka midabbada midabka oo dhammaystiran laga heli karo jidh ahaan iyo websaydh ahaanba waxaana loo isticmaalaa in lagu kabo naqshadaha.
Barnaamijka FontCase kaas oo bixiya noocyo kala duwan oo ah noocyada muhiimka ah ee loo adeegsado naqshadeynta shaxanka.
Qalab aasaasi ah
Khubaradu waxay yiraahdeen, barta bilawga naqshadeynta garaaf kasta waa sawir gacmeed lagu sameeyay qalin iyo warqad, sheeg fikradda bilowga ah isla markaana abaabul mid kasta oo ka mid ah fikradaha on model ah waxay siin kartaa naqshadeeyaha sawir cadaalad cad oo ah sida shaqada dhamaadka noqon doonaa.
Canva, taas oo ah aaladda ugu habboon ee lagu sameeyo sawirrada inay ahaadaan loo adeegsaday boodhadhka, buug-yaraha iyo wax kasta oo la xidhiidha xayeysiinta, waxaa laga heli karaa khadka tooska ah iyada oo loo marayo kombiyuutarada leh marin biraawsar buuxa. Waxay leedahay naqshado u adeega tusaale ahaan ama dhiirigelin si aad adigu u sameysid waxayna ku siisaa casharro xog iyo taageero naqshadeyn ah.
h3 gabal, taas oo ku habboon horumarinta garaafyada iyo astaamaha tan iyo markii ay bixiso awood u leh inay shaqeyso oo ay tafatirto sawirrada waxayna la jaanqaadi kartaa qaar ka mid ah barnaamijyada waaweyn waana in badan oo ka mid ah qalabkii aan horay u soo aragnay, ka yimaadeen xirmadaAdobe Creative Suites”, Aad buu u dhameystiran yahay sidaa darteedna si aad ah ay u isticmaalaan xirfadlayaal naqshadeynta.
Naqshadeynta naqshadeynta waxay kuxirantahay tikniyoolajiyadda sidaan ognahayna teknolojiyaddu si joogto ah ayey usocotaa, sidaas awgeed, naqshadeeyaha waxaa waajib ku ah inuu la joogo cusbooneysiin, xog-ogaalnimo iyo inuu barto wax walba oo la xiriira cusbooneysiinta barnaamijyada hadda jira ama agabyada, kuwa horay u duugoobay iyo waxa soo socda. cusub maxaa yeelay warku wuxuu hubaal ka dhigayaa shaqadaada mid aad u fudud.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Barnaamijyada iyo aaladaha ku jira nashqadeynta garaafka
Hordhac aad u wanaagsan. barnaamijyo naqshadeynta garaafka ah oo aad u wanaagsan.
Waxaan hayaa kumbuyuutar garaaf ah oo leh shaashadda XP-Pen Artist 12 Pro. Hadda waxyar bay waqtigeedii dhaaftay, laakiin wali wax badan baa lala shaqeeyaa Sawirqaade Photoshop, Adobe Premiere iyo xitaa Adobe Dimension ayaa ii oggolaanaya inaan si fudud ugu maareeyo walxaha 3D.
Ku jawaab guangyi